Amalungelo awodwa omenzi we-Apple umtya we-Apple Watch 'ozilungisa ngokwakho' esihlahleni | Ndisuka mac
URuben inyongo | | Apple Watch
Ummangaliso wamva nje awenzelwe wona ngu-Apple unento yokwenza newotshi yayo efanelekileyo. Kodwa asithethi ngemisebenzi emitsha, kodwa elinye lamalungu alo liya kuba nobukrelekrele. Imalunga ne- Izintambo ezinokwenziwa ngokwezifiso ezinokuthi zitshintshwe ngumsebenzisi njengangoku.
Ngoku, e-United States i-Patent kunye ne-Ofisi yoRhwebo, uluvo lwamva nje olusuka eCupertino lufunyenwe. Njengoko kuqokelelwe AppleInsider, imalunga ne umtya wokuzilungisa; Oko kukuthi, umtya owawunepropathi yokukwazi ukuqinisa okanye ukukhulula kuxhomekeke kububanzi besandla ngasinye.
Ngokwamaxwebhu ahamba nelungelo elilodwa lomenzi wechiza, uApple uthi iindlela zokwenza umtya ezikhoyo ngoku azenzi kube lula kwezi zinto ukuba zilingane kakuhle kumsebenzisi ngamnye onikwe ubukhulu beedimitha ezinokubakho. Ngokukwanjalo, iyachazwa loo nto Ukungalingani kakuhle kwe-Apple Watch esihlahleni kunokukhokelela kufundo olugwenxa lwee-sensors del Yam Ukusuka kwiApple. Ukongeza, oku kunokuba mandundu xa umsebenzisi esenza imidlalo, ukubila kunye nokubukela kunokuhamba kancinci.
Ezi zinto ibizezona zikhokelele iApple ukuba ibe nelungelo elilodwa lomenzi olunje ngewotshi efanelekileyo. Iindlela ezahlukeneyo zidwelisiwe kwilungelo lokushicilela ukufezekisa oluhlengahlengiso kwimilimitha. Phakathi kwazo, kuxutyushwa ngezisombululo ezinjengeenxalenye ezandayo emabhanti; dibanisa intambo yememori ngaphakathi komtya. Okanye, yenza iinxalenye zekrisimesi yeApple Watch eyandayo. Ngesi sisombululo sokugqibela, kuthiwa inxalenye yebhokisi ye-Apple izakujikeleza ulusu lomsebenzisi kwaye iphumelele ukubambelela.
nayo, injongo kukuba umtya unememori kunye nokwamkelwa komsebenzisi ngokusebenzisa iisenzi zebhayometri ifakiwe kwaye yakuba iApple Watch ibekwe eluswini, ilungelelaniswe ngokupheleleyo kumniniyo. Ngoku, ungalibali ukuba iApple icinga ngayo yonke into kwaye kuya kubakho indlela yohlengahlengiso lwesiko kwiscreen se Yam. Okwangoku, yonke into iyaqokelelwa uxwebhu kwaye asazi ukuba iza kukhutshwa kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Amalungelo awodwa omenzi we-Apple umtya we-Apple Watch 'ozilungisa ngokwakho' esihlahleni